China double inkatho oyindilinga roller ifektri abakhiqizi | I-Yuantuo
Ukwakheka kwensimbi engagqwali tapered double chain roller: ngokuya ngemodi yokushayela, ingahlukaniswa ibe umugqa wamandla kagesi ne-non-roller roller line, ngokuya ngesakhiwo, ingahlukaniswa ibe umugqa wokuhambisa i-roller ovundlile, othambekele ekudluliseni umugqa we-roller nokujika umugqa we-roller. Ingabuye yakhelwe ngokukhethekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukuhlangabezana nezidingo zazo zonke izinhlobo zamakhasimende. Ububanzi obungaphakathi be-gauge roller ejwayelekile ingu-100-2000mm, njll.
Ukwakheka kwensimbi engagqwali tapered double chain roller: ngokuya ngemodi yokushayela, ingahlukaniswa ibe umugqa wamandla kagesi ne-non-roller roller line, ngokuya ngesakhiwo, ingahlukaniswa ibe umugqa wokuhambisa i-roller ovundlile, othambekele ekudluliseni umugqa we-roller nokujika umugqa we-roller. Ingabuye yakhelwe ngokukhethekile ngokuya ngezidingo zamakhasimende ukuhlangabezana nezidingo zazo zonke izinhlobo zamakhasimende.
Ububanzi obungaphakathi be-gauge roller eyi-100-2000mm, njll. Okunye ukucaciswa okukhethekile kungabuye kwamukelwe ngokuya ngezidingo zamakhasimende.
Irediyamu yokujika ejwayelekile yomugqa we-roller ojikayo ibalwa ngokuya ngefomula, nokunye ukucaciswa okukhethekile kungenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Insimbi engagqwali roller uchungechunge:
Yamukela i-carbon steel nensimbi engagqwali njengobuso obuphathekayo be-roller, futhi ukuthwala kokudlulisa kuthwala ukuthwala okuhlanganisiwe okunemba okwenziwe ngonyathela kwensimbi. Inezinzuzo zokujikeleza okuguquguqukayo, ukuthwala okukhulu (ukuthwala okulodwa okungafinyelela ku-20-100kg), ukusebenza okulula nokufakwa, izindleko zokutshala imali ezisebenza ngemishini ephansi, njll., Futhi zingasetshenziswa kwinqubo yokukhiqiza, yokupakisha neyokuhamba yezimboni eziningi futhi izinkambu.
1. Roller ukwelashwa kwempahla nobuso: i-carbon steel (i-galvanized, i-chrome), insimbi engagqwali, i-carbon steel (eboshwe / i-polyurethane, eboshwe, efuthwe), njll ubude be-shaft roller, ubude obusebenzayo bomzimba wesilinda, ukujiya kodonga, njll. egcizelele ngokwezidingo zomsebenzisi;
2. I-mandrel eqinile yensimbi ye-Carbon, i-blue zinc plating noma i-chromium plating, njll, noma yonke impahla yensimbi engenasici;
3. Ifomu lokufaka i-shaft lingakhethwa: uhlobo lwentwasahlobo ngohlobo, uhlobo lwangaphakathi lwe-shaft shaft, uhlobo lwentambo yangaphandle, uhlobo olugcwele lwe-tenon flat, ngohlobo lwe-shaft split pin hole;
I-roller yenziwa ngensimbi engagqwali
Ububanzi: 25, 32, 38, 50, 60, 76
I-mandrel ingahlukaniswa ngensimbi engagqwali noma insimbi yekhabhoni
Izidingo zobuchwepheshe ze-sprocket roller:
1. Ukukhethwa kwezinto ezibonakalayo nge-roller surface: i-carbon steel lashukumisa, i-chrome yafakwa, insimbi engagqwali, njll ubude be-shaft roller, ubude obusebenzayo bomzimba wesilinda, ubukhulu bepayipi lodonga, njll.
2. Umphini oqinile wenziwe nge-carbon steel efakwe i-zinc eluhlaza okwesibhakabhaka noma yonke insimbi engagqwali. I-shaft ingafakwa ngezindlela ezilandelayo: intwasahlobo cindezela ngohlobo, uhlobo lwangaphakathi lwe-shaft shaft, uhlobo olugcwele lwe-tenon flat nangohlobo lwe-shaft pin hole hole;
3. Ngemuva komhlangano, i-roller ingazungeza kalula ngaphandle kokuminyana;
4. I-roller kagesi ingaqhutshwa ngesondo elilodwa leketango noma isondo lamaketanga amabili. Isondo leketanga elihambelanayo, isondo leketanga, imodeli yeketanga: 06B / 08B / 10B, njll.
Olandelayo: Isigaxa esinezigaxa